Ukuphupha ngesikhumba Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Isikhumba sesikhumba sezilwanyana esingakhange senziwe shushu kwaye senziwe nje kancinci. Isikhumba besisetyenziswa njengezinto zokubhala ukusukela kumaxesha amandulo kwaye ke sisandulela sephepha lanamhlanje. Uninzi lwalo lwenziwe ngezikhumba zamathole, iigusha okanye iibhokhwe.
Kwelinye icala iphepha elenziwe ngesikhumba, kwelinye icala, alenziwanga ngofele lwezilwanyana. Iphepha elenziwe ngeselulosi. Ukusetyenziswa kwesiqhelo, ke ngoko, kuhlala kubizwa ngokungachanekanga "isikhumba."
Nangona kunjalo, isikhumba sasingasetyenziselwa ukubhala okanye ukupeyinta kuphela. Yayisetyenziswa njengelaphu elenzelelweyo lokugubungela incwadi. Ngenxa yokungafihli kwazo, iifestile nezibane zazogqunywe ngesikhumba ngaphambili.
1 Uphawu lwephupha «isikhumba» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isikhumba» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu lwephupha «isikhumba» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwembono ngokubanzi, uphawu lwephupha «isikhumba» luzisa enye ngaliswa kunye naye ukuba ayizokulindeleka ngokupheleleyo kulowo uleleyo. Nangona kunjalo, oku akuyi kuthathwa njengokubi. Ngokuchasene noko, lo msitho umangalisayo uya kuba luncedo kwaye ube mnandi.
Umbono wephepha lesikhumba ephupheni unokukhokelela amava obomi khomba kwindawo ethile. Ukuphupha kufuneka kwabelane nabanye ngako. Amagama akwisikhumba anokubaluleka apha. Kuba iziphumo ezininzi zoyilo zinokufunyanwa koku. Ukuba ufumana umqulu omdala ephupheni lakho, kungekudala uza kwenza ukufumanisa okubalulekileyo.
Ukuba imalunga nemisongo eyenziwe ngesikhumba ephupheni, ngokokuphononongwa ngokubanzi kwephupha, oku kunokuba sisongelo. ilahleko okanye ubonise inkqubo ende. Ukuba isikhumba singcolile okanye sinephupha ephupheni, mhlawumbi nangamabala eoyile, lowo uleleyo uya kubandakanyeka kwizenzo ezithandabuzekayo. Nangona kunjalo, ezi ziya konakalisa igama lakho kwi el mundo yeewotshi.
Ukusika isikhumba ngesikere okanye imela njengophawu lwephupha luphawu olunye Ukwahlulahlula kwixa elizayo. Ukutshabalalisa isikhumba ngokusitshisa okanye ukusikrazula kunokukuqhubela ekubeni wenze ngokukhawuleza nangokungaguquguqukiyo kumcimbi othile.
Uphawu lwephupha «isikhumba» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni kuyabona "kwisikhumba" somfanekiso wephupha uphawu lokugqitywa kwesivumelwano okanye ngokwakho. melwano Kwilizwe lokwenziwa kwewotshi, elibophelelayo kwaye lingqinwe luxwebhu oluhambelanayo.
Ngokusekwe kuphawu lwephupha 'iphepha', isikhumba sinokusetyenziswa kwi ukuba bhetyebhetye kwaye ubonise umnqweno wokuphupha isikhokelo. Ukubhala okanye ukupeyinta amaphepha ezikhumba ngelixa uleleyo kunokutolikwa njengesicelo esivela kokungazi. Umntu kufuneka asebenze kwinto engagqitywanga ebomini bokuvuka.
Ukuba umntu oleleyo ubona abanye abantu bebhala umyalezo kumsongo ephupheni, kuya kufuneka agxile kwinto ethile ebomini bakhe. ingqalelo yiba. Usenokuba uphulukene nento ebalulekileyo ebomini bokuvuka ekufuneka uyifundisise ngakumbi. Zombini iziqulatho zomyalezo wephupha kunye nomntu unokubonelela ngolwazi olongezelelekileyo.
Ngokwenkcazo yephupha lokomoya, uphawu "lwesikhumba" luyala umphuphi, kwelakhe ukukhula ngokomoya ungalibali ulwazi olufunyenwe ngokufunda, kodwa ulubandakanya ebomini.